Xasan Sheekh “Digreetada maanta ee Madaxweynaha, waxay la macno tahay Dastuurka oo la laalay” – AfmoNews
Xasan Sheekh “Digreetada maanta ee Madaxweynaha, waxay la macno tahay Dastuurka oo la laalay”
Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo goordhow shir jaraa’id ku qabtay hoygiisa ayaa ku tilmaamay digreetadii Madaxweyne Farmaajo ee wax ka bedelka asnixinta Dastuurka uu dib ugu dhigay aysan wax qaanuun iyo dastuur cuskaneyn.
Xasan Sheekh ayaa sheegay in tallaabada uu qaaday Madaxweynaha ay la mid tahay iyadoo Dastuurka la laalay.
Waxaa uu sheegay in shirka wadajirka ee Labada Aqal ee Baarlamaanka ay aheyd inuu ka soo baxo qaraarka dib loogu dhigayo wax ka bedelka dastuurka.
“Digreetada Madaxweynaha maanta soo saaray wax qaanuun iyo dastuur, iyo awood Madaxweyne ay cuskan tahay ma jirto, Madaxweynuhu wuxuu mar kale dhinac maray Dastuurka”ayuu yiri Xasan Sheekh.
Xasan Sheekh oo sii hadlayay ayaa yiri “Madaxweynaha xafiiskiisa shaqooyinka ka bilaaban karo waa xadidan yahay, shaqada ugu weyn xafiiska ka bilaabata waa magacaabida Ra’iisul Wasaaraha, shaqo kale rasmi ah waa marka xaalado gooni ah jiraan, madaxweynaha xaq uma lahan sharci uma lahan inuu meeshaas ka bilaabo howsha dastuurka wax looga qabanayo dastuurka ayaa qoraya, waana sida tilmaaman in labada aqal oo baarlamaanka oo kulma oo qaraar ka soo baxo, qaraarkaas intuu aqbalo Madaxweynaha ayuu digreeto ka soo saaro”
Madaxweynihii hore Xasan Sheekh ayaa sheegay in tallaabada uu maanta sameeyay Madaxweyne Farmaajo ay Keli-talisnimadii dhismaheeda, isla markaana aan dalkaan loo celin karin in digreeto Madaxweyne lagu xukumo.
“Dalkaan ma waxaa loo celinayaa in digreeto Madaxweyne in lagu xukumo, tallaabada uu maanta sameeyay Madaxweynaha waxay la macno tahay Dastuurka oo la laalay, Maxamed C/llaahi Farmaajo Digteetarnimada dhismaheeda ayuu dabaq kale ku sii daray”ayuu yiri Xasan Sheekh.
Madaxweyne Farmaajo ayaa maanta saxiixay xeer Madaxweyne oo dib loogu dhigay ansixinta Dastuurka wax ka bedelkiisa, iyadoo loo gudbiyay Baarlamaanka 11aad, maadaama Baarlamaanka 10aad muddo xil heyntiisa ay sii dhammaaneyso.
Si kastaba ha ahaatee tallaabadan ayaa waxay mar kale dalka sii gelienysa xiisadaha siyaasadeed ee muddooyinkan u dhaxeeyay Madaxweyne Farmaajo iyo Musharaxiinta mucaaradka.
Wasiirka Gaashaandhigga Somaliya oo la kulmay Taliyaha AFRICOM
Madaxweyne Farmaajo oo waraaqaha ka guddoomay Safiiro (SAWIRRO)
Taliyaha Ciidanka Xoogga oo xilka ka qaaday General ciidan
Nin oday ahaa oo lagu dilay Gobolka Hiiraan iyo raggii dilay oo baxsaday
Madaxweyne Qoorqoor oo galabta gaaray Gaalkacyo (SAWIRRO)
G/sare Maxamed Dheere oo u geeriyooday dhaawacii Shabaab u gaysteen
Taliyeyaasha Sirdoonka Somalia, Itoobiya & Eritreya oo shir xasaasi ah ku leh Addis ababa